Vous êtes ici: Accueil → A la une → 2020 → août → 17 → CCO : Un dossier de 216 millions ariary circule sur internet
Redaction Midi Madagasikara 17 août 2020 7 Commentaires featured
rakoto 17 août 2020 at 20 h 51 min · Edit
Ho an’i Mr RANDRIANARISOA Paul .Miala tsiny aminao aho Tompoko ,fa solution d’urgence no ilaina fa tsy hiandry amampolotaona indray . Asa na fantatrao izany hoe nohana ny ankizy tsy misy harapaka na dia kely aza ,ao ampaosy tsy misy na ariary zato aza .Ny manana trano hipetrahana aza voaroaka satria tsy voaloa ny hofan-trano .Ny mahatonga ny INSECURITE dia satria tsy misy ny asa nampanantenaina teo @ fifidianana. Ny tena hatahorako dia ho tonga indray ny rotaka dia ho voadoro indray ny fivarotana rehetra .Aoka isika hieritreritra tsirairay Tompoko . Asa na efa vonona @ izany ireo Miaramila bokitra sy kintana mandray karama goavana isambolana ,nefa ny vahoaka mijaly. Misaotra Tompoko.
RANDRIANARISOA Paul 17 août 2020 at 18 h 40 min · Edit
Ny tena marina dia tanteraka ny voalazan’ny Soratra Masina: » Ny olona ho tia vola sy voninahitra,… » Ny vola sisa no mibaiko ny olona iray. Io no ataony andriamanitra ka tompoiny. Firy no mirehareha noho ny volany, eny fa na dia azo tamin’ny halatra aza izany. Tsy miraharaha ilay hoe maha kizo fara ny harena azo tamin’ny tsy rariny. Hany ka ny taranaka any afara no ratsy fiafara. Misy soatoavina very mila volena indray eto amintsika. Simba ny firenena. Ny fanabeazana no anarenana izany.
j.Rakoto de Paris 17 août 2020 at 18 h 38 min · Edit
Aoka re rey olona a ,fomba filalao efa nisy hatry ny ela izany ,raha ariary ny vidin’entana dia hatao ariary zato ,satria ny fanjakana no mandoaha ny faktiora ,tsy misy hatao mahagaga izany .Fa ny tena loza dia nanomboka nahazo vahana ary niamafy io fomba io ,hatry ny 2009.
Bianco hoe ,pac hoe hcj hoe ,mon cul oui ,! que des kaira en cols blancs .
rakoto 17 août 2020 at 17 h 56 min · Edit
Mangalatra Un milliard Ariary ,DIX millions no asaina alohany après procès ny Tribonaly .Ny TRANO MIJOALAJOALA tsy averina @ fanjakana , ny voitures 4×4 rehetra tsy alain’ny fanjakana . Aiza izao i MAHARANTE Jean du Diable ? sy Madama be taloha ? Marina atrin’ny ela ny voalazan’i MATEZA . Misaotra anao mampatsiahy atrany . Ny trano be t@ fitondran’iNGAHY RATSIRAKA rehetra lasa ho an’ny hauts fonctionnaires vendrana rehetra , naloha @ fanjakana ve ny vidiny ? IREO TRANOMBAROTRA ROSO rehetra nanerana ny Nosy no tiako ho lazaina ,sy ireo tranom-panjakana . Ny nataon’i RATSIRAHONANA tsy lazaina intsony .
ANDRIAMARO R. Hery 17 août 2020 at 13 h 44 min · Edit
Mba asio fivoarana ihiany hoa eo amin’ny fiainana, finaritra ny hanakiahana fotsiny fa tsy mba miezaka ny hahalala zavatra. Fitaovampanjakana no novidina ary ary hitampoko hitampirenena fa ampiasaina ao amin’ny CCO ireo fiaovana ireo. Dia mba mandehana manao fanadihadiana mahakasika ny vidiny eny antsena fa aza dia mba manalabaraka tena fa lasa ridicule be fotsiny.
randrarol 17 août 2020 at 13 h 09 min · Edit
Enga anie ka tsy ho marina izany! Raha tsy hiteny hafa tsy faha hvm, nalaza be ange ilay hetsiky ny depiote mapar/tim 72mianadahy iny fa dia nalazo any ho any, ny fitakian’ny paramed faha hvm @ ilay remplacement numérique nampidiran’ny havan-dry zalahy,ary saika nanerana ny minisitera rehetra! Maro tokoa ireo mpiasam-panjakana misotro ronono hatr@ 2002/2017 no manan-janaka mitovy spécialité aminy fa tsy nahatafiditra.Tena misy akony @ asam-panjakana anefa izany resaka akama hvm izany. Ataovy moa ny confrotation ary asaivo mitaraina izay voa!
mateza 17 août 2020 at 11 h 43 min · Edit
Efa nanomboka 2009 ny gaboraraka amin’ny fihinanana volam-bahoaka.
Sambatra éry ry zareo mpihinana volam-bahoaka fa sendra ny vahoaka vendrana sy kentrina
Tohano tsara ny volomboasary fa mbola ho aiza ? vao manomboka hoy i kaina.